Amboon Loltootaan dhiphate, barattoonni 2 wareegaman - OMN
Amboon Loltootaan dhiphate, barattoonni 2 wareegaman
(Amboo, Oromiyaa, Waxabajj 12,2017) – Mormii barattoota magaalaa Amboo Kamisa darbe geggeeffameen wal qabatee reebicha poolisoota Fedarralaatiin barattoonni lama ajjeefamuun himame.
Barattoonni 50 ol qabamanii mana hidhaa keessa gidiraa hamaa argaa jiraachuullee jiraattonni OMN tti himan.
Magaalaa Ambotti mormii tibba kana geggeeffameen wal qabatee reebicha poolisoonni Federaalaa geggeessaniin kan lubbuun barattoota lamaa darbe.
Barattotoa ajjeefaman keessaa ammaaf maqaan isaa kan beekkame barataa Alaminaa Itichaa akka ta’es ibsameera.
Jiraattuun mgaalaa Amboo nuti dubbifne akka jedhanitti barataa Alaminaan manuma isaa keessaa aduu kamisaa qabamee reebamuudhaan kan mana hidhaa galfame.
Reebicha itti hammaateen erga qaamaa laaffatee booda gara hospitaala magaalaa Amboo geeffmuun achi keessatti lubbuun darbuu isaa nutti himaniiru.
Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa akka nuuf himanittis poolisoonni Federaalaa haala gaddisiisaa ta’een barataa Alaminaa erga reebanii booda ajjeesuu mirkaneessaniiru.
Isa malee barataan biroo ammaaf maqaan hin baramnes ajjefamuu namni kun nutti himan.
Barataa Alaminaa Itichaa guyyaa kaleessaa jechuun Waxabajjii 11 bara 2017tti sirni awwaalchaa akka geggeeffames dubbatan.
Barataan lammaffaa ajjeefame kan ammaaf maqaan isaa hin baramin, haala wal fakkaatuun erga reebamee miidhamee booda gara magaalaa Finfinnee geeffamuun tajaajila waldhaansaa argataa osoo jiruu innis kan lubbuun darbe.
Jiraattuun magaalaa Amboo gama isaaniitiin barattoonni ajjeefaman ammaaf kan ifa ta’an lamaan kana qofa. Garuu barattoonni bayyeen wayta ammaa konkolaataa sadiin qabamanii gara mana hidhaatti fuadhamaniiru.
Kana malees kanneen laakkofsaan hin beekkamnes reebamaa turan. Kanarraa ka’uun barattoota meeqqarratti akka gaaga’mni lubbuu dhaqqabee ammaaf baruun rakkisaadha. Sababnis loltoonni Wayyaanee manniin jireenyaa keennarra deemuun, reebuu fi ukkaamsuu itti fufaniiru jedhan.
Haga ammaatti barattoonni shantama hidhamuu kan nuuf himan ammoo jiraataa magaalaa Ambooti. Isaan keessaa reebicha isa muduaterraa dandamachuu dadhabuudhaan kan barataa Alaminaan lubbuun darbe. Kanneen hafanis haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatan.
Barataa Alaminaa Itichaa kan inni baratu mana barumsa sadarkaa lammaffaa Awwaarotti barataa kutaa 9ffaa ture.
Barataa Alaminaan aanaa Amboo ganda baadiyaa Kuree Gaattiraa jedhamutti kan dalate yoo ta’u, sirni awwaalcha isaatis achumatti raawwatamuun himame.
Kan nama gaddisiisu ammoo jedhu jiraattonni magaalaa Amboo, barataan ajjeefame kun harka poolisoota Federaalaatiin akka awwalames dubbatan.
Hawaasni naannichaa sirna awwaalcha barataa ajjeefamerraa akka qooda hin fudhannes poolisoota kanaan danqamuulleen beekkamee jira.
Barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo sirna awwaalcha hiriyyaa isaaniirraa qooda fudhachuuf wayta deemanitti, uggura poolisoota Federaalaatiin wal qabatee mormii geggeessaa oolaniiru.
Mormii aduu Kamisa darbe geggeeffamee ture irratti diddaa fi dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa, mootummaan Wayyaanee warraaqsa diinaggee jedhuun nutti dhufee afanfaajjii uumaa jiru dhaabuu qaba.
Huji dhabdootaaf hujii uumna jechaa sobuun mootummichaa fudhatama hin qabu. Tartiibni qubee Afaan Oromoo tasumaa jala deemtota Wayyaaneetiin jijjiiruun haa dhaabbatu.
Gareen komaandipoosti hatattamatti Oromiyaa dhiisanii bahuu qaban.
Akkasumas hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka DR.Mararaa Guddinnaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi ilmaan Oromoo hidhaman marti gadi dhiifamuu qaban kan jedhuu fi labsiin yeroo muddamaa dheerate haqamuu qaba inni jedhamu mormii isaanii ture.
Haata’u malee mormiin isaanii karaa faallaa ta’een deebi’eefii jira. Haaluma kanaan ajjeechaa, reebichaa fi hidhaan itti fufee jira.
Namoonni nuti dubbifne akka jedhanitti wayta ammaa magaalaan Amboo haala rakkisaa keessa jirti.
Guutumatti networkn dhabamuu, bilbilli manaa fi harkaa hojjachuu dhabuu fi namoonni walqunnamuu akka hin dandeennellee ibsanii jiru.
Loltoonni Wayyaanee ammaan kana heddumminnaan magaalaa Amboo dhiphisanii waan jiraniif haalli nageenyaa gar-malee yaaddessaadha jedhan.
Sambata darbe halkan sa’aa 8:00 irratti naannoo Miniinii jedhamutti qaamnii hidhannoo guutuu hidhate huccuu Agaazii uffatee jiru, saamicha qabeenyaa geggeessuullee jiraattonni kunniin dubbataniiru.
Yoo xiqqaate Konkoolaattota 20 ol daandii gubbatti dhaabanii saamaa akka turanis himamee jira.
OMN: SOMALI NEWS MAY 24, 2O18
OMN: Oduu ( Wax 11, 2017)
Baqattoonni mana hidhaa Jibuutiitti dararamaa jiru
OMN: Ammarreessaa kaleessaa fi har’a ( Caamsaa 24, 2018)
OMN: Gabaasa Addaa -Dhimma warqii MIDROC Laga Dambii irratti xalayaan Biiroolee garaagaraaf ergame maal jedha? caamsaa 24, 2018
OMN: QABSOO OROMOO SADARKAA ITTI AANU CAAMSAA 24, 2018
OMN: ODUU (Caamsaa 24, 2018)
OMN: Odduu amma nu gahee ( Lola Wolloo, aanaa Baatee) (Caamsaa 24, 2018)
OMN: QE’EE OROMIYAA: DIRREE DHAWAA, KUTAA 2ffaa (Caamsaa 24, 2018)
OMN: የሎቄ እልቂት፣ የሲዳማ ህዝብ የነፃነት ትግልና የፊቼ በዓል (MAY 23, 2018)